नयाँ पुस्ताको टोयोटा हाइस फिलिपिन्समा सार्वजनिक, नेपालमा कहिले आउला ? | Automotive News Nepal
नयाँ पुस्ताको टोयोटा हाइस फिलिपिन्समा सार्वजनिक, नेपालमा कहिले आउला ? ८ फागुन, २०७५
जापनिज अटोमोबाइल कम्पनी टोयोटाले लोकप्रिय एमपीभी हायसको छैटौं जेनेरेसनको हायस फिलिपिन्समा सार्वजनिक गरेको छ ।
कम्पनीले आगामी दिनमा हायसलाई अन्य देशको बजारमा समेत उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
यसका आधारमा आगामी दिनमा नेपालमा समेत नयाँ जेनेरेसनको टोयोटा हायस उपलब्ध हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
टोयोटा न्यु ग्लोबल आर्किटेक्चरमा आधारित नयाँ २०१९ टोयोटा हायसको एक्सटेरियर र इन्टेरियरका साथै डाइमेन्सनमा समेत वृद्धि गरिएको छ । यसमा सबै गरी १७ जना बस्न मिल्ने क्षमता छ र मिनी बसको रुपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नयाँ हायस सामान्य स्ट्यान्डर्ड रुफ र लामो भर्सनको हाइ रुफ गरी दुई बडी टाइपमा उपलब्ध हुनेछ ।
त्यसैगरी ३.५ लिटर भी६ पेट्रोल इन्जिन र २.८ लिटर फोर सिलिन्डर टर्बो डिजेल इन्जिन गरी दुई अप्सनमा उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी यो ६–स्पिड म्यानुअल ट्रान्समिसन र अटोमेटिक युनिट गरी दुई इन्जिन अप्सनमा उपलब्ध हुनेछ ।
टोयोटाको यो नयाँ हायस पहिले भन्दा धेरै स्पेसियस र आरामदायक हुनुका साथै सर्भिसिङ र रिपेयरका लागि समेत उपयुक्त भएको दावी गरिएको छ ।
त्यसैगरी यसमा पहिले भन्दा राम्रो राइड क्वालिटी र एनभीएच लेभल छ । यसको अर्थ पहिले भन्दा न्वाइज, भाइब्रेसन र हार्सनेस कम हुन्छ । त्यसैगरी सुरक्षाको लागि प्रयोग गरिएको टोयोटा सेफ्टी सेन्सका कारण यसले युरो एनक्यापमा फाइभ स्टार रेटिङ प्राप्त गरेको छ ।
हाल टोयोटाले एसिया, मध्यपूर्व, अफ्रिका, ओसेनिया, मेक्सिको र ल्याटिन अमेरिकामा टोयोटा हायस बिक्री गरिरहेको छ । संसारमै लोकप्रिय मोडलको रुपमा मानिएको हायस विश्वका १५० भन्दा बढी देशमा बिक्री हुन्छ ।
हाल सम्म ६२ लाख ४० हजार भन्दा बढी हायस बिक्री भइसकेका छन् ।
आज भक्तपुरमा एक्सपेरियन्सिल टेस्ट राइड
काठमाडौं – आज भक्तपुरमा रोयल इन्फिल्ड बाइकको एक्सपेरियन्सियल टेस्ट राइड हुने भएक...
आयल निगमले जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार
काठमाडौं - नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारणको लागि खरिद गरेको जग्गा खरिदको क्रममा...
भारतमा टप १० कार : टाटा टियागो सूचीमा प्रवेश ग¥यो, हुन्डाई र मारुतीलाई धक्का
एजेन्सी – भारतमा गत नोभेम्बर महिनामा बिक्री भएका टप १० कारको सूचीमा टाटा मोटर्सक...